जान्नुहोस् : सुत्ने तरिकाअनुसार आफ्नोे ब्यक्तित्व – Sawal Nepal ||The Power of Information
जान्नुहोस् : सुत्ने तरिकाअनुसार आफ्नोे ब्यक्तित्व
२०७६ असार २६, बिहीबार २२:३३ मा प्रकासित
हरेक ब्यक्तिको सुत्ने शैली फरक फरक हुन्छ । कसैको सुत्ने तरिका एउटा हुन्छ भने कसैको अर्को । मानिसको सुत्ने शैलीबाट उसको ब्यक्तित्व कस्तो छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । हेरौँ केही अनौठो सुत्ने पोजिसन र त्यस्ता व्यक्तिको व्यक्तित्व :
१. मुडा जस्तो :कोल्टो परेर हात खुट्टा तन्काएर सुत्ने पोजिसनलाई मुडाजस्तो भनिन्छ । यसरी मुडाजसरी सुत्ने व्यक्तिहरु साधारणतया रिल्याक्स र अरुका लागि सकारात्मक सोच राख्ने किसिमका हुन्छन् । उनीहरु मानिसहरुसँग निकै फ्रेन्डली हुन्छन् र आफू वरिपरि मानिसहरु भएको रुचाउँछन् ।
यद्यपि, यसरी सुत्ने व्यक्तिहरु सजिलै ठगिने पनि हुन्छन् । सहज हुुनु कतिपय अवस्थामा राम्रो हो तर मानिसहरुले आफ्नो फाइदा नउठाउन् भन्नका लागि तपाईंले आफ्नो कुरा खुलेर भन्नै पर्छ ।
२. सैनिक :उत्तानो परेर हात खुट्टा तनक्क तन्काएर सुत्ने । यो सुताई ‘अटेन्सन पोजिसन’मा उभिएको जस्तो देखिन्छ । सैनिक सुताई भएका व्यक्तिहरु बलियो र मौन बस्ने किसिमका हुन्छन् । उनीहरु धेरैजसो एक्लै बस्न रुचाउँछन् । यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो र अरुको विषयमा निकै गम्भीर तरिकाले सोच्ने गर्छन् ।
३. स्टारफिस :उत्तानो परेर हात खुट्टा फैलाएर सुत्ने अथवा सिरानीमा हात राखेर सुत्ने बानी । यो सुताईको कम प्रचलित पोजिसन हो । यसरी सुत्न रुचाउनेहरु आत्मविश्वासी हुनुका साथै समुदायमा बस्न रुचाउँछन् तर तर सेन्टर अफ अट्र्याक्सन हुन चाहँदैनन् । यसरी सुत्ने व्यक्तिहरु राम्रा श्रोता हुन्छन् र साथीभाइ र परिवारलाई आफूले सक्ने जती सहयोग गर्छन् ।
४. बच्चा झैं :कोल्टो परेर दुबै घुँडा माथि सारेर सुत्ने पोजिसन । यो सबैभन्दा चर्चित सुताईको पोजिसन हो । बेलायतको स्लिम असेसमेन्ट एण्ड एड्भाइजरी सर्भिसको अनुसन्धानमा ४१ प्रतिशत यसरी सुत्न रुचाउँछन् । विशेषगरी महिला यसरी सुत्न रुचाउँछन् ।
यसरी सुत्ने मानिसहरु बाहिरबाट हेर्दा जति कठोर देखिएपनि भित्र भने निकै कोमल हुन्छन् । उनीहरु प्राकृतिक रुपमै चिन्ता लिइरहने किसिमका हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु निदाउन संघर्ष गर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु सजिलै अरु व्यक्तिसँग घुलमिल हुन सक्दैनन् तर एकपटक विश्वास गरेपछि उनीहरुभन्दा राम्रो साथी अरु कोही हुनसक्दैन ।
५. स्काई डाइभर :तपाईं पेट थिचेर सुत्नुहुन्छ, आफ्नो टाउको एकापट्टी फर्काउनुहुन्छ र हात सिरानी मुन्तिर वा टाउकोको साइडमा राख्नुहुन्छ । यसरी सुत्ने व्यक्तिहरु खुल्ला विचारका र निकै आत्मविश्वासी हुन्छन् । सिधा तरिकाले आफ्नो कुरा राख्ने यस्ता व्यक्तिहरु कहिलेकाँही क्रुर र असंवेदनशील पनि हुनसक्छन् ।
सम्बन्धका यी ७ प्रकार : तपाईंको सम्बन्ध कस्तो हो ?
कार्टुनले बालिबालिकाको स्मरण क्षमता बढाउँछ ?
मोवाइलको कारण बिग्रिन्छ दाम्पत्य जीवन ?
विवाह अगाडि पुरुषले बोल्ने ८ झुट यी हुन्
अविवाहित महिलाहरु विश्वका सबैभन्दा खुसी मानिस
कपाल झरेर तनावमा हुनुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस…..